Puntland oo af qabatay Warbaahinta madaxa banaan, kadib markii xirtay saddex idaacadood – idalenews.com
Puntland oo af qabatay Warbaahinta madaxa banaan, kadib markii xirtay saddex idaacadood
Maamulka Puntland ayaa wareegto ka soo baxday albaabada isugu dhiftay ilaa saddex idaacadood oo ka howl gala magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari, iyadoo tani ay sii kordhineyso caburinta warbaahinta madax banaan ee uu ku haayo Maamulka Puntland.
Wareegtada ayaa shaqada lagaga joojiyay Idaacadaha kala ah One Nation, Codka Nabada iyo Radio Daljir xarumahooda ku yaal magaalada Boosaaso.
Maamulka Puntland ayaa ku mar mar siyooday in idaacadaha shaqada laga joojiyay ay sii deyn jireen Idaacado kale oo laga mamnuucay Puntland, kuwaasoo lagu eedeeyay in amniga qal qal geliyaan.
Mas’uuliyiinta idaacadaha la xiray ayaa go’aanka Puntland ku tilmaamay mid lagu caburinayo saxaafada, isla markaana aanay jirin wax digniin ah oo loo jeediyay inta aan la xirin ka hor.
Maamulka Puntland ayaa idaacaddahan ku eedeeyay inay jabiyeen amar hore loo soo saaray oo sheegayay inay joojiyaan baahinta idaacado kale oo sii mara saddexdan idaacadood, balse idaacaddahan la xiray ayaa iyagu beeniyay inay jabiyeen wax amar ah.
Go’aankan ayaa loo arkaa mid Puntland ku dooneyso inay ku af qabato warbaahinta madaxa banaan ee halkaas ka jirta, iyadoo ay ku soo beegmeyso mucaarado deegaanka ah oo u imaaneysay Madaxweynaha talada haya Faroole oo tan iyo markii uu xilka kororsaday ay sii xoogeysanayeen.
Shirweynaha Garsoorka oo maalintii 3aad galay iyo Awooda Madaxtooyada oo lagu dhex arkay